avril | 2020 | InfoKmada | Page 7
Lalana Antananarivo : manomboka ny fanamboarana
InfoKmada - 2 avril 2020 0
Nomen’ny teo anivon’ny ministeran’ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy baiko ireo orinasa misahana ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo hanomboka ny asa, taorian’ny toromariky ny filohan’ny Repoblika. Ireo lavadavaka amin’ny lalana no santarina amin’izany. Nanomboka ny fiandoahan’ny herinandro, ny teny Ankorondrano sy Ivandry iny no namboarina.
Fanampiana ho an’ny mpitondra taxi : manodidina ny 5 000 no efa nisitraka
Manodidina ny 5 000 isa amin’izao fotoana izao ny mpamily taxi efa nisitraka ilay fanampiana avy amin’ny Filohan’ny Repoblika, izay zaraina eny amin’ny lapan’ny tanànan’Antananarivo. Efa misy ny fandaminana ny amin’ny fiantsoana ireo mpamily raha ny fanazavana.
Fitiliana faobe : saro-pady ny fitandroana ny fahasalamana
Niditra tamin’ny andro faharoa ny Fitiliana faoben’ny valan’aretina covid-19 notanterahina teny amin’ny CCI Ivato sy teny amin’ny Jumbo score Ankorondrano. Entitra ny fitandroana ny fahasalaman’ireo olona mifanerasera tamin’ireo toerana ireo raha ny zava-nisy teny an-toerana.
Antsirabe : lehilahy nanao maloto saika niharan’ny fitsaram-bahoaka
Tovolahy kely iray nanao maloto tamin’ny tamboho an’olona no tratran’ny tompon-tanana ka novonoina sy saika niharan’ny fitsaram-bahoaka tao amin’ny fokontany Miaramasoandro Antsirabe renivohitra ny omaly. Tsy ekena ny fandotoana ny tanàna hoy ireo mponina
Fiara mpitatitra vokatra : mitaraina vokatry ny teritery eny an-dalana
InfoKmada - 1 avril 2020 0
Velon-taraina manoloana ny teritery mianjady azy ireo ny mpitati-bokatra indrindra ny mamatsy ny tsenan’Anosibe. Na dia teo aza ny fanambaranan’ny filoha amin’ny fahafahany mifamezivezy malalaka, maro ny teritery sy ny sakantsakana indrindra ny ataon’ny mpitandro ny filaminana sasany eny andalana.
“ Pack Vonjy Aina ” : nahazo fanampiana avy amin’ny fanjakana ireo mpivarotra amoron-dalana
Nahazo ny anjarany amin’ireo fanampiana avy amin’ny fitondram-panjakana ireo mpivarotra amoron-dalana teto andrenivohitra. Nidina ifotony nijery izany fizarana izany ny filoham-pirenena mivady ho an’ny androany maraina.
CNARP : ampy hitsaboana ny marary ireo fanafody eo am-pelatanana
Mahavita mamokatra 2.000 isa isan’andro amin’ny fanafody entina hanasitranana ireo soritr’aretrina sasantsasany amin’ilay valan’aretina ny ivon-toerana CREAP raha toa ka ampy tanteraka ny akora fototra ilaina.Ankilany, nanome toky ny minisiteran’ny fmpianarana ambony fa hanampy azy ireo amin’ny fitadiavana ireo akora fototra mba ahafahana mampitombo ireo vokatra ireo.
Fitiliana teny amin’ny CCI Ivato : hentitra ny fiarovana ny fahasalaman’ny rehetra
Notontosaina tamin’ity androany ity ny fitiliana faobe tamin’ireo olona avy any ivelany natao mise en quarentaine. Nanatrika izany ny filohan’ny repoblika, nankahery ireo olona natao fitiliana.Toerana roa no nanatanterahana izany, ny teny amin’ny CCI Ivato sy teny amin’ny Jumbo score Ankorondrano.